The Best Electric Skateboard Backpacks N'ihi na gị na Board - Jomo Technology Co., Ltd
The Best Electric Skateboard Backpacks N'ihi na gị na Board
Abụkarị ị na-achọghị na-ebu gị electric skateboard anya site n'aka, na a osisi azu paaki pụrụ ime ka ọ dị nnọọ mfe ime otú ahụ. Na a board azu paaki, ị nwekwara ike na-eche free na-ebu gị osisi na-arụ ọrụ n'oge a ezo ụtụtụ ma ka na-agba ịnyịnya ya azụ n'ụlọ mgbe ọ bụ sunnier na mgbede. E nwere ọtụtụ nhọrọ maka electric skateboard backpacks na ike na-ebu a 15 lb + longboard:
Burton Day onye ji Pro 28L
Otu nzuzo iburu n'uche mgbe ị na-anya n'ihi na a osisi azu paaki bụ na snowboard backpacks na-emekarị na-arụ ọrụ mara mma nke ọma. Burton, a maara nke ọma snowboard ngwá ika, nwere a dịgasị iche iche nke snowboard backpacks na-arụ ọrụ nke ọma. The Day onye ji Pro 28L bụ onye dị otú ahụ ihe atụ, na a dịgasị iche iche nke agba, otutu ụlọ maka ndị ọzọ gia ka nkwojiaka nche ya na ikpere pad, na a vetikal board ebu usoro.
Koowheel Electric Longboard Bag bụ a pụtara iche na-ewu ewu nhọrọ na-ebu ma mgbe nile na electric longboards . M na ya onwe ukwuu nwere ike ikwu otu nakwa dị ka ọ na-nnọọ obiọma nabata kasị azụ. E wezụga, n'ihi na Christmas na-abịa, Koowheel Christmas 8600mAh (Ugboro abụọ ike) replaceable Battery Limited Edition E-osisi bụ na-ere. Dị nnọọ na ụbọchị 20. Ọ baghị uru ikwu na ọ bụ a pụrụ iche onyinye maka ọhụrụ na ndị agadi ahịa.
Ị nwere ike ịzụta Koowheel Longboard na akpa iduzi si ukara website.
Ịdị n'Otu Skateboard paaki
The Unity Skateboard azu paaki bụ a ubé nta ọzọ ka ibu Burton na Dakine akpa. Ọ na-akwado skateboards ruo 15 lbs, yabụ na ọ bụghị haziri maka arọ mbadamba ka ha webata achara GT. Otú ọ dị, na mbadamba ka sikwuo Board Dual + (2nd Gen ) na-abịa dị nnọọ n'okpuru 15 lb ịgba, na Unity Skateboard paaki ga-arụ ọrụ nnọọ mma.
Maka achara GT ma ọ bụ Carbon GT nwe (ma ọ bụ, mpako achara GTX n'oge adopters), webata awade a ewere skateboard azu paaki iji jide ha mbadamba. Ọ nwere ọkọlọtọ atụmatụ dị ka a mmiri kalama pouch (Otú ọ dị, ha na-gwara mmanụ), na reflective logos otú ụgbọala nwere ike ịhụ gị n'abalị.
I nwere ike ịtụ webata paaki kpọmkwem site ha web store.
Post oge: Dec-06-2017